भरपूर आनन्द दिन्छ सेक्सले । यि उपाय अपनाउँनुस् । – rastriyakhabar.com
घण्टौंसम्मको सेक्सभन्दा ३ देखि १३ मिनेटको सेक्समै अधिकतम सन्तुष्टि मिल्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । अमेरिकास्थित पेन स्टेट युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त कुरा पुष्टि गरेका हुन् । शोधकर्ता एरिक कोर्टीले भनेका छन्– ‘आजकलका स्त्री–पुरुष पूरै रात सेक्स गरेर बिताउने कल्पना गर्छन् तर यो असम्भव कुरा हो ।’ उनको शोधमा सामेल स्त्री–पुरुषले आधा घण्टाभन्दा बढी नै समय सेक्स गर्न चाहने गरेको पाइयो । तर यसले निराशा र असन्तुष्टि पैदा गर्ने शोधकर्ता कोर्टी बताउँछन् ।शोधकर्ताहरूले सेक्स थेरापी र अनुसन्धानमा छ० जना विशेषज्ञलाई सामेल गराएका थिए । यस समूहमा मनोवैज्ञानिक डाक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी विशेषज्ञहरू थिए । यीमध्ये अधिकांश शोधकर्ताले यौनबाट सन्तोषजनक सुख लिनका लागि पर्याप्त अवधि ३ देखि १३ मिनेट र वाञ्छनीय अवधि ७ देखि १३ मिनेट हुने बताए । यी विशेषज्ञका अनुसार १ देखि २ मिनेटको समय सेक्सका लागि धेरै कम र १० देखि ३० मिनेटको समय धेरै लामो हो ।सेक्सका लागि उचित समयः जहिले पनि रातिको समयमा मात्रै सेक्स गर्नु स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । बिहान उज्यालो हुनुभन्दा केही समयअगाडिदेखि बेलुका घाम नअस्ताउन्जेलसम्म सेक्स गर्नुहुँदैन । अझ बिहानको सेक्स त स्वास्थ्यका दृष्टिले झनै हानिकारक हुने बताइएको छ । बेलुका खाना खाएको सरदर २ घण्टापछिको सेक्स हितकारी हुन्छ । जो व्यक्ति राति १०–११ बजे खाना खान्छन्, उनीहरूले आधारातपछि मात्र सेक्स गर्नु राम्रो हुन्छ ।सुत्ने बेलामा दूध पिउनुहुँदैन । दुई घण्टाअघि नै पिइसक्नुपर्छ अनि मात्र सेक्सका लागि उचित हुन्छ । त्यस्तै मिन्स भएको समयमा पनि सेक्सलाई वर्जित मानिएको छ । यद्यपि त्यस बेला कन्डम लगाएर पनि सेक्स गर्नुहुँदैन । त्यस समयको सेक्सले रोग निम्त्याउन सक्छ । यदि पार्टनरबीचमा क्रोध, चिन्ता, दुःख, अविश्वास छ र मानसिक समस्या छ भने सेक्स गर्नु उचित हुँदैन । दुवै जना प्रसन्न भए मात्र सेक्स आनन्ददायक हुन्छ । रोमान्टिक कुराकानी गरेर दुवै जनामा सेक्स जागृत गराएपछिको सेक्सले आनन्द र सन्तुष्टि दिने हुनाले यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
सेक्सवाट परिचीत हुनुभएकालाई सवै कुरा थाहा भयो । धेरै पहिलोपटक सेक्सको तयारीमा पनि हुन सक्नुहुन्छ । कुरा यिनै विषयसँग सम्वन्धीत रहेर गरौं ।
पहिलो सेक्स गर्दा ध्यान दिनुपर्ने १० कुराहरु
१. क्रेजी सेक्सः यदि तपाईं आफ्नो पहिलो सेक्स धेरै राम्रो हुने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत सोच्दै हुनुहुन्छ । याद राख्नुहोस् यो तपाईंको लागि नयाँ अनुभव हो र यसका लागि तपाईं धैर्यवान् हुन जरुरी छ । तपाईंको पहिलो सेक्स अनुभव राम्रो नभएपनि यसमा डराउनु र आत्तिनुपर्ने छैैन किनभने यो समयसँगै राम्रो हुँदै जान्छ ।
२. चरमोत्कर्षः यदि पहिलोपटक सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चरमोत्कर्षको आशा नराख्नुहोस् । यतिबेला एक अर्काको शारिरिक आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनुहोस् र लिनुहोस् ।
३. झुटो चरमोत्कर्षः महिलाहरुले पहिलो पटक सेक्स गर्दा आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख्नका लागि झुटो चरमोत्कर्षको नाटक गर्नुपर्दैन । यो तपाईंको पहिलो पटकको सेक्स भएका कारण तपाईंको पार्टरले तपाईंलाई बुझ्नुहुनेछ ।
४. फोहोरी गफः धेरैजसो मानिसहरु पहिलो पटकको सेक्स गर्नुपूर्व फोहोरी गफ गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् तर यो सत्य होइन् । पहिलो पटकको लभ मेकिङको दौरान बिस्तारामा आफ्नो पार्टनरसँग तपाईं के चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दा पनि हुन्छ । फोहोर कुराहरु पछि गर्न सक्नुहुनेछ ।
५.तपाईं पहल गर्नुहोस्ःधेरैजसो महिलाहरु माया दर्साउन लजाउने गर्दछन् । तर पहिलो पटक सेक्स गर्दा तपाईं पहल गर्नुहोस र उनलाई पर्खेर नबस्नुहोस् । यदि एक अर्काको मुख ताकेर बस्नुभयो भने पुरा रात नै बित्छ ।
६. पहिलो पटकको सेक्स पीडादायक हुन्छः पहिलो पटकको सेक्स निकै पीडादायक हुने धेरै मानिसहरुको भनाई हुन्छ तर यदि ठिक तरिकाले फोरप्ले गरियो र तपाईं यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने पहिलो पटकको सेक्स निकै सजिलो र कम पीडादायी हुन्छ । चाहिएको खण्डमा तपाईं लुब्रिकेन्टको प्रयोग पनि गर्नसक्नुहुनेछ ।
७. आकारको महत्वः विश्वास गर्नुहोस् सेक्समा आकारको कुनै पनि भूमिका हुँदैन । महिलाहरुमा धेरैजसो यो भ्रम हुन्छ कि उनको पुरुषको आकार जति ठूलो हुन्छ त्यति नै उनीहरुहरु आनन्दित हुने सोच्दछन् तर यो सोचाई गलत हो । चरमोत्कर्षमा आकारको कुनै पनि महत्व हुँदैन ।
८. पोर्न फिल्मजस्तो अनुभवः यदि तपाईं पोर्न स्टारजस्तो सेक्स गर्ने सोच्दैहुनुहुन्छ भने यो तपाईंको सोचाई गलत साबित हुनेछ । पोर्न फिल्ममा देखाइने धेरैजसो भुटो हुने भएकाले यसको पछि नलाग्नुहोस् ।
९.ब्लिडिङको धारणाः धेरैजसो मानिसहरु पहिलो पटकको सेक्स पछि महिलाको रगत आउने धारणा छ । ब्लिडिङको धारणा कुमारित्वसँग जोडिएको हुँदैन । हाइमन टुटेमा ब्लिडिङ हुने गर्दछ । हाइमन खेल खेल्दा, साइकल चलाउँदा र अरु केहि कार्य गर्दा नै टुटिसकेको पनि हुनसक्छ ।
१०.धेरै बेरसम्म सेक्सः पहिलो पटकको सेक्स धेरै लामोसम्म हुने कुरा गलत हो । त्यसकारण पहिलो पटकको सेक्समा कुनै उद्देश्य नराखी मात्र आनन्द लिने तरिकाले गर्नुहोला ।
बुधबार, असार १३, २०७५ मा प्रकाशित